चौथों अन्तर्राष्टिय नेपाली टोपी दिवस यसरी मनाइयो (फोटो फिचर सहित) | www.aagopati.com Websoft University
चौथों अन्तर्राष्टिय नेपाली टोपी दिवस यसरी मनाइयो (फोटो फिचर सहित)
काठमाडौ १७,पुष । आज “हाम्रो शान, हाम्रो पहिचानः नेपाली टोपी अभियान” भन्ने नाराका साथ चौथों अन्तर्राष्टिय नेपाली टोपी दिवस मनाइएको छ । दिवसको अवसरमा जागरुक युवा अभियान नेपालले राजधानीको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
नेपालीको पहिचान स्थापित गर्ने उद्देश्य अनुरुप विगत तीन बर्षदेखि हरेक अंग्रेजी नयाँ बर्षको पहिलो दिन (१ जनवरी) लाई नेपाली टोपी दिवसका रुपमा मनाउदै आएको छ ।
टोपी दिवसको आवश्यकता किन भन्ने प्रश्न यतिबेला जल्दोबल्दोरुपमा उठ्ने गरेका छन् । सबै मुलुकको आ–आप्mनै पहिचान झल्किने राष्ट्रिय पोशाक हुन्छ । नेपालमा पनि कुनै बेला दौरा सुरुवाल र टोपीलाई राष्ट्रिय पोशाकका रुपमा लिईन्थ्यो तर गणतन्त्रको आगमनसँगै यसलाई राष्ट्रिय पोशाकको सूचिबाट हटाईएको छ । अहिले हामी राष्ट्रिय पोशाकबिहिन छौ । यो भनेको राष्ट्रिय पहिचानबिहिनको अवस्था हो ।
एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्काेतिर नेपाली समाजले आधुनिकताको नाममा मौलिकपन भुल्दै गएका छन् । आँखा चिप्लेरै विदेशी संस्कार, खानपिन र आकर्षणमा चुर्लुम्म दुब्न थालेका छन् । अचेलका पुस्ता आधुनिक बन्ने होडमा फेसनदेखि बोलीसमेतमा पश्चिमापन झल्काउन थालेका छन् । आप्mनो पारिवारीक, सामाजिक र राष्ट्रिय विषयवस्तु अंगाल्दा पुरातन भईने डर छ युवा पुस्तामा । नजानेर होईन कि जानेरै अन्धाधुन्दरुपमा पश्चिमा प्रवृति अंगालीरहेका छन् । यसको मतलब सधै स्वदेशी सामाग्री र ब्यवहार मात्रै पालना÷प्रयोग हुनुपर्छ भन्न खाजिएको भने होईन ।
पूर्वीय होस या पश्चिमा, त्यहाँको राम्रो कुराको मात्रै अनुशरण गर्नुपर्छ । यसो हुन सके मात्रै उत्कृष्ठ समाज निर्माण हुन्छ तर आधुनिकताको नाममा भएभरका कुराहरु सर्लक्कै आँखा चिम्लेर सिको गरि दिँदा हाम्रो समाज भड्काउमुखी बन्दै गएको छ । स्वतन्त्रताका सिमा नाघ्दै गएको छ । अहिले हामीले झट्ट हेर्दा पश्चिमेली मुलुकहरुले आकाश छोए जस्तो देखिए पनि ब्यवहारगत रुपमा कतिपय कुरामा उनीहरु पश्चाताप गर्दै पुर्वेली संस्कृतितर्फ आकर्षिक हुन थालेका छन् । तर हामी भने ?
अंग्रेजी नयाँ बर्ष मनाउनु नराम्रो कुरा होईन तर यसलाई नेपालीपन झल्किने गरी मनाउन सके यसको थप महत्व झल्किन्छ कि भन्ने हेतुले टोपी दिवसको सुरुआत भएको हो । एकातिर अंग्रेजी नयाँ बर्षलाई नेपालीपनले मनाउने सोच र अर्काेतिर नेपाली पोशाक हटाएको पीडा । यिनै कारणले नेपाली टोपी दिवसको जन्म भएको हो ।
पहिलो (२०१४) र दोश्रो (२०१५) नेपाली टोपी दिवस फेसबुकमा सिमित रह्यो । पहिलो बर्षमा फेसबुकमा केही व्यक्तिमा मात्रै सिमित यो अभियानले दोश्रो बर्षमा स्कुलदेखि गाउँसम्म प्रवेश पायो । यो विषय फेसबुकमा भाइरल बनेलगतै विभिन्न क्लब, समुह तथा व्यक्तिहरुले आ आप्mनै तरिकाले नेपाली टोपी दिवस मनाउन थालेका छन् । दुई बर्षको अन्तरालमा देश विदेशबाट थुप्रै ऊर्जाजन्य उत्साहप्रद प्रतिक्रियाहरु प्राप्त भएका छन । त्यसपछि गत बर्ष सन् २०१६ देखि हामीले सडकमार्फत पनि टोपी दिवस मनाउन थाल्यौ ।
गणतन्त्रको आगमनसँगै नेपालमा समुदायपिच्छे हक अधिकार र पहिचानका कुरा उठ्न थालेका छन् । यो एकदमै जायज र स्वभाविक कुरा हो तर भई दियो के भने जातीय र सामुदायीक पहिचानको आवाज बुलंद बनिरहँदा राष्ट्रिय पहिचान भने संकटमा पर्दै गएको छ । तर वास्तवमा जातीय पहिचानसँगै राष्ट्रिय पहिचानको पनि जगेर्ना हुनुपर्ने हो । विगतका विविध तन्त्रहरुको पहिचान भन्दै दौरा सुरुवाललाई राष्ट्रिय पहिचानको सूचिबाट हटाएपछि हामी पहिचानबिहिन बन्न पुगेका छौं । यतिबेला हामीले टोपीको महत्व र वास्तविकता बुभ्mन जरुरी छ । नेपाली टोपीको इतिहास कैलाश पर्वतसँग पनि जोडिन्छ । कतिपयले खस क्षेत्रीसँग तुलना गरे पनि नेपाली टोपीको सम्वन्ध मुसलमान समुदायसँग पनि जोडिन्छ । अतः नेपाली टोपीको साइ्नो बंगलादेशको ढाका, काश्मीर, टर्की, कैलाश पर्वत र पाल्पासँग जोडिन्छ ।
त्यसो त कतिपयले नेपाली टोपीलाई पहाडीयाको उपमा दिने गरेका छन् । तर सबैले बुभ्mनुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली टोपीले हरेक जाती, क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ । टोपीको माथिल्लो चुच्चो भागले हिमाली, बीचको भिरालो भागले पहाडी र मूनिको समथर भागले तराईको प्रतिनिधित्व गर्छ । अर्काे कुरा हामी हिमाल, पहाड, तराई वा पूर्व र पश्चिम जहाँ पुगे पनि नेपालीको शिरमा यो टोपी सजिएको भेट्छौ । त्यसैले नेपाली टोपीलाई खस, क्षेत्रीको पहिरण भनेर आलोचना गर्नु उपयुक्त हुँदैन । भारी बोक्ने भरिया दाईदेखि प्रधानमन्त्रीको शिरमा समेतको शिर यो टोपीले सजिएको हुन्छ ।
नेपाली टोपी भन्नाले ढाकाटोपी, कालोटोपी, भादगाउँले टोपी लगायतलाई लिन सकिन्छ । अर्काे कुरा हाम्रो देश बहुजातीय भएकाले जातीय पहिरण र यस अन्तर्गत विभिन्न जातीय टोपीहरु पनि छन । ति पनि हाम्रै मौलिक सम्पत्ती हुन त्यसैले सम्मानका साथ जगेर्ना गरिनुपर्छ । सामुदायिक टोपीहरु खास समुदायले खास अवसरमा मात्रै लगाउने गरे पनि नेपाली टोपी सबै समुदायले लगाउने गरेका छन् ।
अर्काे कुरा पहिचानको बहस भैरहँदा आखिर हामी नेपालीलाई चिनाउने मुख्य पहिचान के हो त ? भन्ने मूल र नैतिक प्रश्न उठेको छ । दौरा सुरुवाललाई जातीविशेष भन्दै हटाए पनि सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली टोपीलाई नेपालको पहिचानका रुपमा घोषणा गरियोस् भन्ने टोपी अभियानको मूख्य माग हो । दौरा सुरुवाल बहिस्कार गर्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ज्यू स्वयंले टोपीलाई स–सम्मान शिरमा सजाउनु भएको छ । यो भन्दा अरु कुनै गतिलो उदाहरण होला र ?
कुनै पनि कुरामा खोट खोतल्दै जाने हो भने शत प्रतिशत चोखो केही पनि हुँदैन । त्यसैले कुनै पनि कुराको कार्यान्वयन गर्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने आधार भनेकै बहुसंख्यक जनमत हो । र, बिश्वमा सर्वमान्य तथ्य पनि यही नै हो । यस मानेमा युगौदेखि प्रचलनमा रहेको, कसैको आत्मसम्मानमा चोट नपु¥याएको र बहुसंख्यक नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली टोपीलाई राष्ट्रिय पहिचानका रुपमा घोषणा गरियोस् । अतः सक्नुहुन्छ भने सधै लगाऔं, सक्नु हुन्न भने औपचारिक कार्यक्रम र जनवरी १ का दिन नेपाली टोपी लगाऔ । जय नेपाली टोपी ।